La Compagnie inotangisa basa idzva rakananga reherikoputa pakati peNice neMonaco
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » La Compagnie inotangisa basa idzva rakananga reherikoputa pakati peNice neMonaco
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • Monaco Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kufamba uchienda kuFrench Riviera kunowanikwa kupfuura nakare kose kune ese bhizinesi-kirasi yendege, La Compagnie. Muna Chivabvu 2019, boutique yendege yakaparura nzira nyowani yemwaka pakati peNew York neNice, ichipa vafambi kupinda kwakananga kumaodzanyemba kwe Furanzi panguva yekutanga mwaka. Kurumbidza iyo nyowani yebhizinesi-kirasi nzira, iyo nendege yatanga kudyidzana nekambani yeMonegasque helikopta, Monacair, ichipa kukurumidza uye isina musono kubatana kune vafambi vanoenda kuMonaco.
Mumaminetsi asingasviki maminetsi manomwe - angango mhanya kuti unakirwe - vafambi vanogona kubhururuka pakati peNice Côte d'Azur Airport (NCE) neMonaco Heliport (MCM), vachidzivirira imwe nzira-inorema nzira yekufambisa. Vapfuuri vanobhururuka mune nyowani nyowani Airbus H7 maherikoputa, ine zvigaro zvevatanhatu vatanhatu mumhepo-yakanaka nyaradzo uye imwe yekuwedzera mukamuri yekutakura. Iyo ndiyo nzira yakakwana yevafambi vebhizinesi - kana chero mufambi - kukwidziridza kugara kwavo muChitungwiza cheMonaco, nekukurumidza track track uye chete maawa 130 anodiwa ndege isati yasimuka muNice. Iyo Monacair helipad muNice iri padyo padyo neLa Compagnie gedhi rekufambisa uye kushushikana-kusununguka kuenda uye kubva mundege.
Iko kudyidzana kutsva kunopawo kubhadharisa kudonhedza uye kunotora-sevhisi muVIP minivans dzese La Compagnie ndege dzakabhuka kubva kana kuenda kuMonaco. Nekurerukirwa kwekuchengetwa kumwe chete kuburikidza neLa Compagnie, mutengo pamufambi wenzira imwe-yeherikoputa nendege pakati peNice neMonaco iri $ 170 USD; mutengo pamunhu mufambi wekutenderera-rwendo ndege ndeye $ 300 USD.
Yakagadzwa muna 1988 naStefano Casiraghi, Monacair inonyanya kuita mabasa epamusoro-soro uye akagadzirwa, uye ndiye mutsigiri wepamutemo wekufambisa kweherikoputa yeHSH Albert II, Muchinda weMonaco. Kubva kuMonaco Heliport, kambani yakashanda zvinopfuura makumi mashanu ndege dzakarongwa pazuva pakati peNice neMonaco kubvira 50.
"Tiri kufara kudyidzana nekambani inotungamira yeherikoputa, Monacair, iyo yakatifadza neruzivo rwayo rwakadzama mukutakura kweVIP pamwe nekunzwisisa kwayo vafambi vebhizimusi refu," akadaro Jean Charles Périno, Mutevedzeri Wemutungamiriri weZvekutengesa neMakambani eLa Compagnie. "Sevhisi nyowani iyi inopa nyika yekureruka uye kuvimbika kune vafambi vedu - uye ndizvo zvirinani mazuva ano."